Uru nwaanyị abụghị sọ n'ụsọekwu - BBC News Ìgbò
Uru nwaanyị abụghị sọ n'ụsọekwu
3 Maachị 2018
Nkenke aha onyonyo Uru nwaanyị abụghị sọ n'ụsọekwu - Ngozi Ugwu
Ọtụtụ ụmụnwaanyị nọ n'Enugwu steeti akwaala arịrị na anaghị enye ụmụnwaanyị ohere ha nhatanha na nke a na-enye ụmụwoke n'Naijiria.
Ha kwuru na ọtụtụ ihe na-emebi tata n'ala anyị bụ maka na ọ bụ ụmụnwoke nọkarị n'ọchịchị.
Mgbe BBC Igbo gbara ha ajụjụ onu, ụmụnwaanyị si na mpaghara Enugwu steeti gbarụrụ ihu na ụfọdụ ụmụnwaanyị na-eche na ha adịghị ike.
Nke a mere na ha na-emechi ọnụ mgbe a na-emegbu ha n'ụlọọrụ, ụlọakwụkwọ,ezinaụlọ nakwa ebe dị icheiche.
Na ụbochị ole na ole na-abianụ, ụmụnwaanyị n'uwa nile gbaa gburu gburu ga-eme mmemme eji echeta ụmụnwaanyị.
0nyeisi otu jikọtara ụmụnwaanyị ndi nta akuko na mpaghara ọwụwa anyanwụ Nigeria bụ Chibota Edozie gwara ụmụnwaanyị ka ha were ohere mmemme ụbọchị ha nke afọ 2018 wee hụ onwe ha n'anya ma kwado nwaanyị ọbụla chọrọ ịzọ ndọrọndọrọ ọchịchị.
A chụọla ndị ọrụ 300 na AIT
A wala otu onye ekwesighị isi na Kenya
A chọtala ụmụakwụkwọ atọro na Dapchi?
Onye ode akwụkwọ ndị otu ọrụ n'Enugwu bụ NLC na bekee bụ Comfort Noel Ugomsi kọwara ụmụnwaanyị dịka onu na-ebu isi bụ ụmụnwoke, ọ bụrụ na olu gbajie, isi ga- ada.
N'ihi nke a ọ gwara ụmụnwoke ka ha nyochaa, hụ na ebe ọbụla nwaanyị nọ n'isi, mpụ na aghụghọ anaghị adị na ya.
Ugomsi jizi ohere a gwa ụmụnwaanyị ka ha hapụ itụ egwu ma teta n'ụra, bia dozie obodo Naijiria.
Ọtụtụ ụmụnwaanyị ndị ọzọ gụnyere, Ify Ugwu, Comfort Meife, Ngozi Agbo nakwa Ifeoma Amuta, kwuru na ụmụnwaanyị Naijiria adila nkwadebe ibu ndi isi n' ebe ọbụla dị elu n'ala Naijira dịka ndị ogbo ha na mba ụwa ndị mepere emepe.
Ha nyere ụmụnwoke ndụmọoụu ka ha mara na uru nwaanyị bara abụghị sọọsọ n'usọekwu, kama na nwaanyị bu nne, buru odozi ezinaụlọ, buru onye ọzụzụ na nlekọta ọbụladị n'ụlọ ya mana ebe ọbụla ọ nọ na akpata ihe afọ ga-eri.
Ụbọchị eji eme mmemme ụmụnwaanyị n'ụwa nile bụ ọnwa Maachị gba abalị asatọ.
Ụmụnwaanyị akatọọla emume ị dọọ ha aka n'akwa n'ime ahịa
Onye bụ ọchịagha Alex Badeh?
Ọkụ abaala be ndị mmadụ na Legọs